Kate ndiye feverish! Anoda kwazvo kuva nemwana # 4, hanzvadzi yaCharlotte, asi William anoramba - TELES RELAY
HOME » mwe Kate ndiye feverish! Anoda kwazvo kuva ne # 4 mwana, hanzvadzi yaCharlotte, asi William anoramba
Mazuva mashomanana apfuura, Meghan Markle naHanry Harry vakagamuchira mwana wavo wokutanga pamwechete. Apo nyika yakafara pakuberekwa kwechecheche, vamwe vakafunga kuti Kate Middleton zvakare anogona kunge ane imwe. Uye zvirokwazvo, Duchess yeCambridge inoda chinhu chimwe chete.
Pachikwata cheHounslow pamasasa emabhiza, Kate akabvuma kuti haana kunetseka. Rumor yaive nayo kuti akanga ane pamuviri nevana # 4. Zvisinei, zuva raitevera, sezvo aifarira mitambo yeSt. Patrick, Dayta akaonekwa newaini, achipikisa zvinyorwa zvose sezvo zvakanyanya kuipa kumukadzi ane pamuviri kunwa doro.
Imwe hanzvadzi yaCharlotte?
maererano Life & StyleKate Middleton iye zvino ari kurwisana nematambudziko makuru emwana fever. Asi, zvinosuruvarisa, Prince William haana chokwadi pamusoro pekuita izvi zvikuru. Ndiye baba vakuru uye vanoda vana. Zvisinei, kune zvinhu zvokufungisisa pakutanga.
Zvinyorwa na Kate Middleton (@katemiddletonphotos) on Apr 15, 2019 pa 12: 15am PDT
Iyo Duchess yeCambridge inogona kuchinja pfungwa dzake, inoratidza kuti munhu uyu akaiswa zvakanaka. Anoda kuva nehanzvadzi duku yaCharlotte, saPippa Middleton. Zvinyorwa zvakati:
Haana kudzorerazve uye haadi kutarisira. William anozeza. Anofunga kuti basa rakakwana rokutarisira vana vatatu pasi pemakore mashanu.
Zvinyorwa na Kate Middleton (@katemiddletonphotos) on Jan 15, 2019 pa 5: 11am PST
Kune dzimwe zvipingamupinyi
Aizotevera muenzaniso wehosikadzi kana aiva nevana vana. Sezvakanaka sezvinofungwa iyi pfungwa, inonyanya kuipa zvikuru kuna Kate. Paakanga ari nepamuviri naChris Louis, Duchess akabatwa nepamuviri yepamuviri. Zvinongowedzera kumuitira kana akaedza kuva nemumwe mwana. Saka, zvakanyanyoodza mwoyo!
Zvinyorwa na Kate Middleton (@katemiddletonphotos) on Dec 14, 2018 pa 3: 48am PST
Zvakanaka, hapana chakaipa mukugara kwenguva refu kwenguva refu. Zvichida Mutongi uye Duchess vachawana nzira dzakapoteredza zvinetso izvi. Itai izvi uye tiudzei kuti mungada sei kuti muve mwana # 4.
Vatsigiri Vose Vanofanira Kupemberera Mutemo weTaiwan pamusoro pekuroorana kweGay - New York Times